डब्ल्यूएचओको यस्तो डरलाग्दो चेतावनीले युरोपभर त्रास — Sanchar Kendra
१प्रधानमन्त्रीलाई फेरि शपथ गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
२कोरोनाले देश अस्तव्यस्त बनेका बेला नेपालीहरुको लागि आयो यस्तो खुसीको खबर, हेर्नुहोस बिस्तृतमा
३आज ७३६८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १४५ को मृत्यु
४लेस्टर सिटीले जित्यो एफए कप फुटबलको उपाधि, चेल्सी पराजित
५सकियो ओली-नेपालबिचको ‘वान टु’ वार्ता, के भयो सहमति ?
६कोरोनाबिरु’द्ध ल’ड्न सीसीएमसी बैठकले के गर्यो निर्णय
७यस्ताे छ इजरेल-प्यालेस्टाइनबीच तनाव भइरहनुकाे मुख्य कारण र १०० वर्ष पुरानो छ मुद्दा
८सिंहदरबारमा ओली र नेपालबीच ‘वान टु वान’ वार्ता सुरु, यी बिषयमा हुदैछ छलफल
९कहिलेदेखि सुरु हुदैछ नयाँ शैक्षिकसत्र ? शिक्षा मन्त्रालयले दियो यस्तो जानकारी
१०बाबुराम भट्टराईको यस्तो खुलासाले ओली तनावमा
११निषेधाज्ञाका बेला काठमाडौंमा यस्ताे काण्ड मच्चाउने ५ जना पक्राउ, को हुन् उनीहरु ?
१२इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच यु’द्ध झनै चर्किएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाईडेन चाले यस्तो कदम
११डब्ल्यूएचओको यस्तो नया डरलाग्दो चेतावनीले विश्वभर त्रा’स
१२काठमाडौँ उपत्यकामा कर्फ्यु सुरु हुन नपाउँदै आयो अर्को कडा आदेश
डब्ल्यूएचओको यस्तो डरलाग्दो चेतावनीले युरोपभर त्रास
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले युरोपेली देशलाई कोभिड–१९ का कारण लगाइएको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्दा भारतजस्तै यहाँ पनि कोरोना पोजेटिभ केसको आँधी आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार युरोपका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख ह्यान्स क्लूगले बिहिबार भने, ‘जब प्रतिबन्ध खुकुलो पारियो तब मानिसहरु भारी मात्रामा एकै ठाउँ जम्मा हुनथाले, जब भाइरसको अत्यधिक संक्रामक भेरियन्ट देखिन थाल्यो र भ्याक्सिनेसनको दर निकै कम भए, यस्तो स्थितिमा कुनै पनि देशमा कोरोनाको आँधी आउन सक्छ ।’ उनले भने, ‘भारतजस्तो स्थिति कुनै पनि बेला निम्तिन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न अत्यावश्यक छ ।’
हालैका दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा लगातार वृृद्धि भइरहेको छ । जानकारका अनुसार विभिन्न कारणले ठूलो संख्यामा मानिसहरुको एकै स्थानमा भीडभाड हुनु यसको मुख्य कारण हो । जानकारका अनुसार भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो घातक लहरका लागि कोरोना भाइरसको भारतीय भेरियन्ट B.1.617 जिम्मेवार छ ।
हेन्स क्लूगले भने, ‘युरोपेली देशले यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ कि महामारीको दिशा परिवर्तन गर्नमा निजी र सामूहिक स्वास्थ्य र सामाजिक दुरीको उपाय प्रमुख कारक हुन सक्छन् । दुई महिनामा पहिलो पटक अघिल्लो हप्ता युरोपमा कोरोना संक्रमणको मामिला ‘निकै कम’ भएको छ । तर थुप्रै इलाकामा संक्रमण दर अहिले पनि अत्यधिक छ ।’
उनका अनुसार मानिसहरुलाई भ्याक्सिन दिने काममा पनि युरोपको प्रदर्शन निकै राम्रो छ । यहाँ करिब सात प्रतिशत मानिसहरुलाई कोरोनाको भ्याक्सिन दिइसकिएको छ जबकी १६ प्रतिशत मानिसहरुलाई भ्याक्सिनको पहिलो डोज दिइसकिएको छ ।
हालै युरोपका केही देशले कोभिड–१९ का कारण लगाइएको प्रतिबन्धमा चरणबद्ध तरिकाले खुकुलो पार्न सुरु गर्ने बताएका थिए । फ्रान्सले १९ मेदेखि लकडाउनमा राहत दिन सुरु गर्ने र जून ९ देखि उनीहरुले हेल्थ पाससहित आउने विदेशी पर्यटकलाई अनुमति दिने बताएको थियो । यहाँ १९ मे देखि रेष्टुरेन्ट, बार, थिएटर खोल्ने अनुमति पनि हुनेछ ।
जर्मनीका अनुसार जो मानिसहरुले भ्याक्सिनको दुबै डोज पाएका छन्, उनीहरुले कोरोना परीक्षणको सर्टिफिकेट बिना नै पसलमा जाने अनुमति हुनेछ । यसबारे जर्मनीले चाँडै नै दिशानिर्देश जारी गर्नसक्छ ।
भारतमा कोरोना संक्रमणको चेन तोड्न केही हप्ता पूर्ण लकडाउन अति आवश्यक- डा.फौची
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका प्रमुख चिकित्सा सल्लाहकार तथा वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फौचीले भारतमा कोरोना संक्रमणको ‘सुनामी’ रोक्नका लागि केही हप्ता पूर्ण रुपमा लकडाउन गर्नुपर्ने बताएका छन् । कुनै पनि देश लकडाउनमा जान नचाहे पनि कोरोना संक्रमणको चक्र तोड्नका लागि भारतमा केही हप्ता लकडाउन आवश्यक रहेको डा. फौचीको भनाइ छ ।
भारतीय अंग्रेजी पत्रिका द इन्डियन एक्सप्रेससँगको कुराकानीमा डा. फौचीले भारतले कोरोना संक्रमण रोकथाममा के कस्ता उपाय अपनायो भन्दा राजनीतिक मुद्दा बन्ने बताए । उनले भने, ‘भारतले कोरोना संक्रमणको स्थितिलाई कसरी सम्हालिरहेको छ भन्दा यो राजनीतिक मुद्दा बन्छ । म यसबारेमा केही भन्दिनँ, म स्वास्थ्य क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्ति हुँ राजनीतिज्ञ होइन ।
’ उनले पछिल्लो समय भारत अत्यन्तै कठिन र निराशाजनक अवस्थामा रहेको पनि बताएका छन् । उनले कुराकानीमा भनेका छन्, ‘जब तपाईं यस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुहुन्छ, तत्कालै समग्र रुपमा विचार गरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।’
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउनु महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको असर देखिन केही समय लाग्ने भएकाले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘खोप एउटा उपाय हुन सक्छ । यो अत्यन्त आवश्यक पनि छ तर अहिले अस्पतालमा अक्सिजन अभाव, बेड अभाव जस्ता समस्यालाई यसले कम गर्दैन । खोपको प्रभाव देखिन केही समय लाग्छ ।’
उनले वर्तमान समयमा कोरोना संक्रमणले निम्त्याएको संकट समाधानका लागि एउटा आयोग वा आपत्कालीन समूह बनाउनुपर्ने पनि बताए । यस्तो समूहले अक्सिजन तथा अन्य मेडिकल सामग्रीको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै भारतले यस कार्यमा अन्य देश र विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोग लिनुपर्ने पनि उनले बताए ।
‘अन्य देश पनि भारतलाई सहयोग गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । पछिल्लो संकटमा भारतले पनि अन्य देशलाई सहयोग गर्न निकै उदारता देखाएको छ,’ उनले भने । त्यस्तै चीनले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अपनाएको उपाय पनि प्रभावकारी हुने डा. फौचीको भनाइ छ । ‘चीनले केही हप्ताभित्रै अस्थायी अस्पताल निर्माण गरेको थियो । जुन देखेर पूरा विश्व चकित थियो । भारतमा पनि मानिसहरु अस्पताल र उपचार खोजिरहेका छन् ।’
अमेरिकामा कोरोना खोप वितरणमा नेसनल गार्डको सहयोग लिइएको उल्लेख गर्दै उनले भारतमा पनि सेनालगायतका विभिन्न समूहबाट अस्पताल निर्माणमा सहयोग लिन सकिने बताए । उनले भने, ‘यसमाथि गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ । अस्पताल निर्माणमा उनीहरुको सहयोग लिन सकिन्छ । सेनाले यसमा सहयोग गर्न सक्छ । के तपाईं अमेरिकाले झैं तत्काल सेनाको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ ? अमेरिकाले कोरोना खोप वितरणमा नेसनल गार्डको सहयोग लिएको थियो ।’
कोरोना भाइरस शत्रु भएको उल्लेख गर्दै उनले युद्धकालीन अवस्थामा झैं फिल्ड अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने पनि बताए । भारतजस्तो देशमा अहिलेसम्म करिब २ प्रतिशत नागरिकलाई मात्र खोपको पूरा डोज लगाउनु निकै गम्भीर स्थिति भएको उनको भनाइ छ ।
भारतले खोप अभियानलाई छिटोभन्दा छिटो विस्तार गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । संक्रमणको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने यसले अझ भयावह रुप लिने पनि उनले चेतावनी दिए । यसले समाजमा कस्तो विस्फोटक रुप लिन्छ भन्ने अमेरिकाको उदाहरणबाट बुझ्न सकिने पनि उनको भनाइ थियो ।
‘अमेरिका केही समयका लागि विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रभावित देश रहेको थियो । अमेरिका विश्वकै धनी देश पनि हो । हामीले यसका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट तयारी गर्नुपथ्र्यो तर हामी सबैभन्दा नराम्री प्रभावित भयौं,’ उनले भने ।
कोरोना भाइरसले को धनी, को गरिब भनेर नहेर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘भाइरसले को कति धनी विकसित र उन्नत छ भन्ने हेर्दैन । यदि तपाईंले यसको रोकथाम र नियन्त्रणको उपाय पहिचान गर्नसक्नु भएन भने यसले निकै कठिन परिस्थितिमा पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने । कोरोना संक्रमण कम नभएकै अवस्थामा यसविरुद्ध विजय प्राप्त भयो भनेर घोषणा गर्नु ठूलो गल्ती भएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै छोटो समयको लकडाउनले कम क्षति हुने भन्दै यसबारेमा भारतले सोच्नुपर्ने पनि डा. फौचीले बताए । ‘मलाई लाग्छ भारतले तुरुन्त अस्थायी लकडाउन लागू गर्नुपर्छ । यस समय अक्सिजन, मेडिकल उपकरण, पीपीई किट र सहज उपचारको व्यवस्था उपलब्ध गराउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।
तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण तुरुन्त लकडाउन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । ‘एक वर्ष पहिले चीनमा यस्तै विस्फोटक अवस्था आएको थियो । त्यतिबेला चीनले देशमा पूर्ण रुपमा लकडाउन गरेको थियो । यदि तपाईंले तुरुन्तै यस्तै कदम उठाउनुभयो भने ६ महिनाका लागि लकडाउन गर्नुपर्दैन । यसले संक्रमणको चेन तोड्न सकिन्छ,’ फौचीले भने ।
केही हप्ताका लागि पूर्ण रुपमा लकडाउन गर्ने हो भने संक्रमणको फैलावटलाई प्रभावकारी ढंगले कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अमेरिकाका प्रसिद्ध संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. फौचीले अमेरिकाका ७ जना राष्ट्रपतिसँग काम गरिसकेका छन् ।
भारतमा कोरोना संक्रमणले एकपछि अर्को रेकर्ड राखिरहेको छ । भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबीस घण्टामा मात्र ४ लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
पछिल्लो एक दिनमा भारतमा ४ लाख १ हजार ९ सय ९३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । एकैदिन कुनै पनि देशमा ४ लाखभन्दा बढीलाई संक्रमण देखिएको यो पहिलो पटक हो ।
आज ७३६८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १४५ को मृत्यु
कोरोनाबिरु’द्ध ल’ड्न सीसीएमसी बैठकले के गर्यो निर्णय
यस्ताे छ इजरेल-प्यालेस्टाइनबीच तनाव भइरहनुकाे मुख्य कारण र १०० वर्ष पुरानो छ मुद्दा
निषेधाज्ञाका बेला काठमाडौंमा यस्ताे काण्ड मच्चाउने ५ जना पक्राउ, को हुन् उनीहरु ?
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच यु’द्ध झनै चर्किएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाईडेन चाले यस्तो कदम
चिनियाँ अनुदानको स्वास्थ्य सामग्री बोकेका गाडी तातोपानी नाकातर्फ प्रस्थान, के-के आउदैछ ?
यी हुन् कोरोना संक्रमित र मृत्यु भएकाहरुका आफन्तसँग चर्को शुल्क असुल्ने एम्बुलेन्स चालक, परे प्रहरी फन्दामा
भारतमा कोरोना खोप किन नराम्ररी असफल भइरहेछ ?